U-nekiyi Manufacturers uye Suppliers | China U-Zvipfigiso Factory
U-bhaudhi hunovapo sechikamu danda mutsetse Hardware.
Izvi simba mutsetse Hardware riri deadend Hardware, zvinogona kushandiswa ne kuturika okusungisa, bhora ziso, vanobatanidza kuroorwa ndiro, u-clevis, clevis ziso mu kugadzwa (OPGW - Manyiminya pasi waya) uye ADSS (zvose-dielectric kuzvitsigira), AAAC, ACSS, ACSR, vakashonga uye akafukidza mhando hutachiwana conductors.
Uyewo U nemipande anoshandiswa sezvo waya tambo inoti pamwe casted chikamu, kuti fixate muitisi kana tambo mukati mayo, maererano tightening manatsi.
Vaya mhando naro kazhinji zvinosanganisira preformed mukomana kunzwisisa. ruzivo Izvi zvinoratidzwa Helical mutsetse Fittings nzvimbo yedu yepaIndaneti.
zvishongedzo iwayo akapfuura tembiricha kuchovha uye kuchembera nemiedzo, ngura kuramba bvunzo, Makakatanwa bvunzo paungano akakodzera danda mutsetse Hardware
High simba zvinhu yekuzvidzivirira waya zvadzikira kana zvimwe kukuvadzwa panguva kushanda nguva dzose panhongonya simba mutsetse. Mari kuvaka nechivimbo uye dambudziko proofed hunowedzera maumbirwo mukuru voltage wire mu panhongonya hutachiwana mitsetse.